Ikhabhathi ye-Rustic log kwindawo enkulu yelizwe labucala.
I-Quant, i-rustic evulekileyo yesicwangciso sekhabhathi kwindlela yasemaphandleni, imizuzu engama-20 emantla eLondon Ontario kunye ne-30 min ukuya eGrand Bend. Iihektare ezimbini zomhlaba wabucala kunye namachibi.
Ikhabhathi ye18th Century kwipropathi yabucala yasemaphandleni, kufutshane nendawo enkulu yedolophu yaseLondon, eOntario. Zonke izinto ezitofotofo zekhaya ezinendawo yangaphandle egqibeleleyo ukonwabela indalo. Indawo efanelekileyo yokuphuma kunye nokuqhawula. Ibandakanya indawo yomlilo, i-BBQ kunye nendawo yomgangatho. Le yirenti yamaxesha athile efumaneka ukusuka kuEpreli ukuya kuNovemba.
Ipropathi enkulu yabucala yasemaphandleni. Inkonzo yamaTshetshi kunye namangcwaba akufuphi. Imizuzu esuka kwiilali ezincinci zase-Ilderton, uLucan kunye ne-Ailsa Craig ezineevenkile kunye neendawo zokutyela. Ngaphakathi kwemizuzu engama-20 eLondon Ontario kunye ne-35 min ukuya eGrand Bend. Indawo egqibeleleyo yokuzola, ukubaleka kwezothando.
Ifumaneka ngefowuni okanye ngetekisi. Ngomntu ukuba uyafuneka.